Ye-Mon's Personal Pages: February 2008
၂၈၊ ၂၊ ၂၀၀၈
နင်ကြီးတယ် ... နှစ်ခါဖြတ်
အခုတလော ဘာကြောင့်မှန်း မသိ ငယ်ငယ်တုန်းက ဖန်တရာတေအောင် ကြားဖူးတဲ့ ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ် ခေါင်းထဲ ရောက်ရောက်လာတယ်။ ပြန်ပြောပြပါရစေ။
တခါတုန်းက ဖိုးသူတော် တစ်ဦးဟာ ဂဏန်းအလွန်စားချင်နေသတဲ့။ ဒါပေမယ့် ဖိုးသူတော် ဖြစ်နေတော့ သူ့အသက်ကို သတ်လို့မရပြန်ဘူး။ ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာ သွားနေတဲ့ ဂဏန်းတွေကို ကြည့်ရင်း ဖိုးသူတော် အတော့်ကို စိတ်ဒုက္ခများနေပါသတဲ့။
ဒါနဲ့ အကြံရပြီး မီးဖိုကာ အိုးကြီးတစ်လုံးထဲ ရေထည့်၊ ပွက်ပွက်ဆူအောင် ကြိုပါလေရော။ ပြီးတော့ အိုးပေါ်မှာ တုတ်တစ်ချောင်းကို ကန့်လန့်ဖြတ်တင်လိုက်ကာ ဂဏန်းတွေကို တစ်ကောင်ပြီး တစ်ကောင် ဖမ်းပြီး တုတ်ပေါ်လျှောက်ခိုင်းလေတယ်။ မလျှောက်ခိုင်းခင်မှာ နင့်ထိုက်နဲ့နင့်ကံပဲ တုတ်ဟိုဘက်ရောက်ရင် လွတ်စေ လို့ ဆိုသေးသတဲ့။ ဂဏန်းလေးတွေလည်း ရေနွေးငွေ့တွေကြားမှာ ကြိုးစားလျှောက်ရင်း ရေနွေးအိုးထဲကို တဖြုတ်ဖြုတ်ပေါ့။ ဖိုးသူတော်ကတော့ သူ့အသက်ကို ကိုယ်တိုင် မသတ်ရပဲ ဂဏန်းသား စားရတော့မှာမို့ အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်နေပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဂဏန်းအကြီးကြီးတစ်ကောင်ကို မိလာပြန်တော့ ထုံးစံအတိုင်း တုတ်ပေါ်ဖြတ်ခိုင်းပါတယ်။ ဂဏန်းကြီးလည်း မတတ်သာပဲ တုတ်ပေါ်မှာ လှုတ်လီလှုတ်လဲ့နဲ့ လျှောက်ရလေတယ်။ ရေနွေးကလည်း ပွက်ပွက်ကို ဆူနေလေတော့ ဂဏန်းကြီး တကိုယ်လုံး ရေနွေးငွေ့တွေ့ ဖုံးနေတော့တာပေါ့ (ဆော်နာ စိမ်သလို ရှိမယ် ထင်တယ်နော် )။ ဖြစ်ချင်တော့ ဂဏန်းကြီးက ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး တုတ်ဟိုဘက်ကို ရောက်သွားပါတယ်။
ဖိုးသူတော်လည်း မခံချိမခံသာဖြစ်၊ ဂဏန်းကြီးကို စားကလည်း စားချင်နဲ့ အရူးတပိုင်း ဖြစ်နေပါရော။
ဥာဏ်နီ ဥာဏ်နက်ထုတ်ရင်း နောက်ဆုံးတော့ ဖိုးသူတော် အကြံရပြီး ဂဏန်းကြီးကို ပြောလိုက်သတဲ့
“နင်ကြီးတယ် နှစ်ခါဖြတ်” ... တဲ့။
မြန်မာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖိုရမ်တွင် ကို snaing တင်လာသော ပုံပြင်ကို မြန်မာပြန်ပါသည်။
ဒီဂဏန်းကြီး ဒုတိယအကြိမ်မှာ တုတ်ဟိုဘက်ထိပ်ကို ရောက်မယ်ထင်ပါလား၊ ဒါမှမဟုတ် ရေနွေးအိုးထဲပဲ ပြုတ်ကျလေမလား။
ဟိုဘက် ရောက်မယ်လို့ထင်ရင် ဖိုးသူတော်ကြီး ဘာဆက်လုပ်မယ်များ ထင်ပါသလဲ။
မှတ်ချက်ထားခဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ အထူးကျေးဇူးပါ။ အကြောင်းပြန်သူများရင် အနှစ်ချုပ်ပြီး ပြန်ရေးပေးပါ့မယ်။
16 comments Labels: jokes
မြန်မာ့ခေါင်းဆောင်များ ပြောခဲ့သော ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ (၁)
မြန်မာ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ တချိန်ကပြောခဲ့သည်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားလိုပါသည်။
အချိန်ကား ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းက ဖြစ်သည်။
၀န်ကြီးချုပ်။ ။ ဘာဖြစ်လို့ နယ်ဆေးရုံတွေကို ဆရာဝန်တွေ မပို့သေးသလဲ
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး နှင့် အဖွဲ့။ ။ ဆရာဝန်တွေ မရှိလို့
၀န်ကြီးချုပ်။ ။ တနိုင်ငံလုံးအတွက် ဆရာဝန်တွေ ဘယ်လောက်လိုမလဲ
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး နှင့် အဖွဲ့။ ။ အခုလောလောဆယ်အတွက် ဆရာဝန် သုံးရာလောက်လိုမယ်
၀န်ကြီးချုပ်။ ။ ဆေးကောလိပ်က တနှစ်မှာ ဆရာဝန်ဘယ်လောက်ထွက်သလဲ
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး နှင့် အဖွဲ့။ ။ လေးဆယ်လောက်ထွက်တယ်
၀န်ကြီးချုပ်။ ။ ဆေးကောလိပ်က ဆရာဝန်တွေ ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အထိ စောင့်မနေနိုင်ဘူး၊ အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန်က ဆရာဝန်တွေကို ချက်ခြင်းသွားငှားချေ၊ ဆရာဝန်တွေမရှိဘဲ ဆေးရုံတွေဟာ ဟောင်းလောင်းကြီးဖြစ်နေတာ ကျက်သရေမရှိဘူး၊ ဆရာဝန်တွေကို အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်က ခပ်မြန်မြန်ငှားပြီး နယ်တွေကို ချက်ခြင်းပို့လိုက်ပါ။
(အမှန်တကယ်လည်း ထိုနိုင်ငံများမှ ဆရာဝန်များကို ငှားရမ်း၍ နယ်သို့ပို့ပေးသည်ဟု သိရပါသည်။)
2 comments Labels: burma, burmese, health, quote
New Address of Public Health in Myanmar Joint Blog
၁၃၊ ၂၊ ၂၀၀၈
ပြည်သူ့ကျန်းမာ စုပေါင်းဘလောက် နေရာရွှေ့ခြင်း
ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသည့် မြန်မာ ဘလောက်ဂါများ စုပေါင်းရေးသားသော ပြည်သူ့ကျန်းမာ ဘလောက်ကို လိပ်စာအသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးလိုပါတယ်။ လိပ်စာမှာ -
ဤသို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ဘလောက် ပရိသတ်များ လွယ်ကူစွာ လာရောက်ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
0 comments Labels: announcement, blogging, burmese, public health
Helping someone to buildacity
A friend of mine is desperate to buildacity. If you like to help click the following links:
How it works is, if you click the first link, population of that city increases. If you click the second link,afactory is built. The third, improves the transport network. No pressure. It's up to you.
6 comments Labels: english, general
To Nay Phone Latt
ပိုင်ရှင်ဝေးနေသော ဘလောက် (သို့) ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်
သူနဲ့ လူချင်း မဆုံဘူးပေမယ့် စာရေးအားကောင်းတဲ့၊ စာကောင်းတွေရေးတဲ့ မြန်မာဘလောက်ဂါ တစ်ယောက်အဖြစ် အမှတ်ထင်ထင် ရှိနေခဲ့သည်။ ရံဖန်ရံခါဆိုသလို သူ့ဘလောက်ကို အလည်ရောက်ခဲ့ဖူးသည်။ ဘလောက်ဂါများနေ့ ဆင်မနာ၊ ဘလောက်စာအုပ် ကိစ္စတွေမှာ တက်ကြွပါဝင်သူမှန်း သိရတော့ လေးစားမိသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၆ရက် နေ့မှာတော့ သူ့ရဲ့ လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော် တစ်နှစ်ပြည့်ပြီ။ သူကတော့ ဘလောက်ဂါများ လက်လှမ်းမမီနိုင်ရာ အဝေးတစ်နေရာမှာ ရောက်နေလေရဲ့။ ဒါပေမယ့် ... သူ့ဆီပုံးမှာတော့ ဆုတောင်းသံတွေ ညံနေမြဲ၊ ညံနေဆဲ။ ဘလောက်ဂါ ညီအကို မောင်နှစ်မတွေ ရင်ထဲမှာလဲ သောကမီးတွေနဲ့ ပူလောင်ဆဲ။
လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော်ရေ … မောင်ရင် ဘေးမသီရန်မခပဲ ပြန်ရောက်လာမယ့်နေ့ကို မျှော်နေမယ်။
1 comments Labels: burmese, friends
New Address of Public Health in Myanmar Joint Blog...